साहित्यमा ‘तिमी’, राजनीतिमा ‘तपाईं’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
साहित्यमा ‘तिमी’, राजनीतिमा ‘तपाईं’
राजा वीरेन्द्रले नेता गणेशमान सिंहलाई ‘तिमी’ सम्बोधन गरे । सिंहले राजालाई सिकाउँदै भने, ‘यसरी आफ्ना हजुरबासँग काम गरेका राजनेतालाई सरकारले तिमी भन्नुहुँदैन, सम्मान गरेर बोल्नुपर्छ ।’ भनिन्छ, वीरेन्द्रले त्यही दिनदेखि ‘तिमी’ आदरार्थी कोड प्रयोग गरेनन् ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि, अझ नेपाल गणतन्त्र भएपछि, राजनेता र शक्तिमा आसीनहरू बदलिए । राजनीतिक परिवर्तनले स्वाभाविक रूपमा राजनेताहरू धेरै निकाल्ने नै भयो ।
असार १९, २०७८ अभि सुवेदी
साहित्य र राजनीतिमा आदरार्थीको प्रयोग विषयमा भर्खरै एउटा छलफल भयो । साहित्यिक समालोचना र सृजनशील साहित्य लेख्ने व्यक्तिको नाताले केही दायित्व पूरा गर्न सानै भए पनि यो लेख लेखिएको छ ।
नेपाली भाषामा ‘तिमी’ र ‘तपाईं’ को प्रयोग विषयमा हामीले साहित्यका फाँटमा धेरै छलफल गरेनौं । तर, नेपाली साहित्यकारले साधारण छलफल गरेर वा नगरेरै पनि समालोचनाको भाषामा आदरार्थी, खासगरी ‘तिमी’ को प्रयोगमा धेरै ठूलो काम गरेका रहेछन् भन्ने पछि बोध भयो । तर साहित्यकार, अझ समालोचना लेख्नेले, जसमा आफैं पनि पर्छु, यस विषयमा खासै केही नलेखेको देख्दा केही असजिलो लागेको हो । व्याकरण र हिज्जेका छलफलमा निकै काम भए, हुँदै छन् । तर, नेपाली समालोचनामा नेपाली लेखकले कसरी
‘तिमी’ आदरार्थीको सहज प्रयोग गरे र त्यसलाई मानक बनाए, त्यस विषयमा लेखिनुपर्थ्यो, खासै लेखिएनछ । यो लेख त्यसै जानकारीको एउटा आरम्भसम्म हो ।
नेपालमा ‘तिमी’, ‘तपाईं’ वा ‘हजुर’ जस्ता आदरार्थीका प्रयोग राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएका छन् । दुई प्रसङ्ग वाचाल छन्, जुन ठीक विपरीत छन् । छयालीस/सत्चालीस सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो प्रसङ्ग छ । संवैधानिक राजा भएका वीरेन्द्रलाई भाषा प्रयोगमा केही असहजपना भएको थियो त्यसबेला । तर, उनले त्यसमा तुरुन्तै बानी बसाए, आफूलाई । घटना यस्तो थियो :
नारायणहिटी राजदरबारमा गणेशमान सिंहसँग कुरा गरिरहँदा राजा वीरेन्द्रले उनले सिकेको राजाले प्रयोग गर्ने आदरार्थी कोडअन्तर्गत गणेशमानलाई ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गरे । नेता गणेशमानले राजालाई सिकाउँदै भने– यसरी आफ्ना हजुरबासँग काम गरेका र अरू राजनेताहरूलाई सरकारले ‘तिमी’ भन्नुहुँदैन, सम्मान गरेर बोल्नुपर्छ । सिंहले हामीलाई सुनाएको कुराबाट मैले सार राखेको हुँ । भनिन्छ, राजा वीरेन्द्रले त्यही दिनदेखि लगभग ‘तिमी’ भन्ने आदरार्थी कोडको प्रयोग गरेनन् । राजालाई जनताका नेताले ‘तपाईं’ भन्नु भनेर सिकाएपछि परिवर्तन भएको उदाहरण हो यो ।
दोस्रो उदाहरण धेरै वाचाल छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि, अझ नेपाल गणतन्त्र भएपछि, राजनेता र शक्तिमा आसीनहरू बदलिए । राजनीतिक परिवर्तनले स्वाभाविक रूपमा राजनेताहरू धेरै निकाल्ने नै भयो । त्यसमा कमिनिस्ट नेताहरूको बाहुल्य रह्यो । त्यसो त नेपाली कांग्रेसका नेता पनि थिए । तर, राजनीतिक परिवर्तन भएर दलका नेता सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूमा एउटा ‘हाइरार्की’ को चेतना पलायो । नेपालको ठूलो मिडिया हाउस र त्यसबाट निस्केको अखबार ‘कान्तिपुर’ सबैभन्दा चर्चामा आयो । कारण उही आदरार्थी ‘तिमी’ र ‘तपाईं’ को प्रयोग थियो । लामो छलफल नगरौं । त्यो २०७४ सालतिरको कुरा हो । ‘कान्तिपुर’ ले सबैलाई ‘तिमी’ कोड प्रयोग गर्ने सम्पादकीय भाषिक नीति नै बनाएको रहेछ । यो विषय त्यसबेलाका भाषा सम्पादक अखण्ड भण्डारीले लेखेको ‘कान्तिपुरले किन सबैलाई तिमी भन्छ ?’ (फागुन ७, २०७४) भन्ने लेखमा छ । तर, त्यति मात्र होइन, राष्ट्र प्रमुख वीरेन्द्रलाई नेता गणेशमान सिंहले भनेको ठीक उल्टो सरकार प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘कान्तिपुर’ लाई ‘तिमी’ कोड प्रयोग गरेकोमा गुनासो गरेछन् । अखण्डले लेखेका छन्, ‘ओलीले गुनासो गरे, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई तिमी भन्ने अधिकार कान्तिपुरलाई कसले दियो ? कान्तिपुरले चाहिं अरूलाई आदर गर्नुपर्दैन ? सबैभन्दा ठूलो हो कान्तिपुर ?’
यो विषय निकै चल्दै छ भन्ने देखिन्छ किनभने ९ माघ २०७७ मा ‘कान्तिपुर अनलाइन’ ले त्यही लेख फेरि छाप्यो । कुरा चाखलाग्दो हो । राजा वीरेन्द्रले ‘तिमी’ छोडेर ‘तपाईं’ प्रयोग गरे, तर ‘कान्तिपुर’ ले ‘तपाईं’ प्रयोग नगरेर ‘तिमी’ कोडलाई नै मानक बनायो, जुन लोकतन्त्रसम्मत थियो । एउटा भाषाकर्मी, साहित्यकार र प्राज्ञिक कर्म गर्ने मानिसको नाताले भन्छु, सबै स्वतन्त्र मिडियामा ‘तिमी’ प्रयोगको विषय सहज, स्वाभाविक र प्रजातान्त्रिक चेतनाजनिन थियो र छ । यस विषयलाई शक्ति र प्रतिष्ठासँग जोडेर सरकारका नेता र तिनका सल्लाहकारले लिएको कुरा सही छैन । गणेशमानले राजालाई ‘तपाईं’ भन्न सिकाउनु र अर्का नेता ओलीले पत्रकारलाई ‘तपाईं’ भन्न सिकाउनुजस्ता उदाहरणले भित्री कुरा बोल्छन् । लोकतान्त्रिक नेताहरूले खुला मनले सिक्नुपर्छ ।
शक्तिमा आसीनले ‘तिमी’ को स्वाभाविक प्रयोगलाई यसरी संवेदनशील भएर लिनुको प्रस्ट कारण यस्तो हुन सक्छ । भाषा प्रयोगका स्वाभाविक विषयलाई शक्ति, प्रतिष्ठा र राजनीतिसँग जोडिनुको पछि एउटा शक्ति–मनोविज्ञानको ग्रन्थिले काम गरेको हुन सक्छ । त्यो गम्भीर विषय हो । ‘तिमी’ को प्रयोग नेपाली भाषामा सहज, सृजनशील, सम्मानजनक र प्रजातान्त्रिक रूपमा आएको देखिन्छ । त्यस विषयमा शक्तिमा आसीन र तिनका सल्लाहकारलाई ज्ञान भएको देखिएन । त्यसो त साहित्यमा यो कसरी एउटा सम्मानजनक र स्वाभाविक प्रयोग भएर आएको छ भन्ने विषय साहित्यकारले पनि छलफल–जानकारीमा ल्याएनौं । साहित्यमा ‘तिमी’ को कसरी स्वाभाविक, स्वतन्त्र अनि सम्मानजनक प्रयोग र थोरै भए पनि छलफल भएको छ, हेर्नुपर्छ । एउटा संस्मरणबाट विषयमा पस्न चाहन्छु ।
नेपाल भाषाशास्त्र समाजको २६ नोभेम्बर १९९१ मा भएको बाह्रौं वार्षिक सम्मेलनमा अध्यक्षको भाषणमा मैले सन् १९९० को भर्खरै भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनेताहरूमा पञ्चायतकालको शक्ति र ‘हाइरार्की’ को भाषाको मोहले काम गरिरहेका उदाहरण राखेर यसलाई प्रजातन्त्रसँगै परिवर्तन हुन नसकेको मनोग्रन्थि भनेको थिएँ । सोआसका प्राध्यापक माइकल हट्ले उनको किताब ‘नेपाल इन् द नाइन्टिज्’ (१९९४:८८) मा त्यही परिवर्तन हुन नसकेको मनोग्रन्थिबारे मेरो कुरालाई उद्धरण गरेका छन् । आज आएर हेर्दा प्रजातान्त्रिक संस्कारका निम्ति शक्तिका सपना बाधक भएको विषय प्रस्ट हुँदै गएको देखिन्छ ।
अर्को विस्तृत लेखको विषय हो, तर यहाँ केही शब्दमा भन्दा नेपाली साहित्यकारले ‘तिमी’ को प्रयोग अत्यन्त सहज र सृजनशील किसिमले गरे । समालोचकले मविवि शाह नामधारी राजा महेन्द्रका कविता, खासगरी ‘उसैको लागि’ का छलफलमा ‘तिमी’ प्रयोग गरेका उदाहरण छन् । समालोचकले ‘तिमी’ कोडलाई सहज बनाउनुपर्छ र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मौन सिद्धान्त बनाए । उनीहरू पाका र सम्मानजनक लेखकलाई पनि ‘तिमी’ कोड प्रयोग गरेर लेख्छन् । प्रायजसो समालोचनामा मैले ‘तिमी’ कोड प्रयोग गरेर लेखें, अहिले पनि लेख्छु । यदुनाथ खनाल, कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, तारानाथ शर्मा, इन्द्रबहादुर राई, खगेन्द्र संग्रौला, ताराकान्त पाण्डे आदि हिजो र आजका समालोचकले ‘तिमी’ कोडको प्रयोग गरेर लेखेका छन् । त्रिवि नेपाली विभागका प्राध्यापक समालोचकहरू ‘तिमी’ कोड प्रयोग गरेर लेख्छन् । एकाध अपवाद छन् । ‘तपाईं’ लेखिएका केही समालोचना पनि छन् । तर, ती अब पुराना भइसके । साहित्यिक समालोचनामा नितान्त ‘तिमी’ कोड प्रयोग गर्ने पद्धति बसेको छ । त्यो मानक भएको छ र सहज अभिव्यक्तिको आधार भएको छ ।
हामी साहित्य लेख्नेले कुनै राजनेतालाई ‘तिमी’ कोड प्रयोग गरेर लेख्यौं भने त्यसमा हाम्रो राजनीतिक सरकोर छ कि भनेर हेर्ने आवश्यकतै हुँदैन । ‘तिमी’ कोड प्रयोग नगरी अब नेपाली समालोचना लेखिँदैन । नेपाली साहित्य लेखन, खासगरी समालोचनाले जसरी ‘तिमी’ कोड प्रयोग सहज रूपले गर्छ, त्यो अहिलेका राजनीतिकर्मी र नेताका निम्ति अनुकरणीय विषय हो । ‘तपाईं’ लेख्ने भाषिक ‘रजिस्टर’ हरूमा त्यो आदरार्थीको प्रयोग भइहाल्छ । साहित्य र मिडियाले ‘तिमी’ प्रयोग गर्नु सहज र समयसम्मत प्रक्रिया हो ।
आदरार्थी वा ‘हाइरार्की’ मनोग्रन्थिले चिन्तित राजनीतिज्ञ र सरकारी नेताले यो पिरोलोबाट सिक्नुपर्छ र आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, कतै म वा हामीभित्र शक्तिलोलुपताको जन्म भएको त होइन ? साहित्यमा हामीलाई चिन्ता छैन किनभने हामी समान, सृजनशील र स्वतन्त्र छौं । हामी ‘तिमी’ बाट सम्मानित छौं र त्यसैबाट सम्मान गर्छौं ।
प्रकाशित : असार १९, २०७८ १०:५३
मकलको आगो र फुलमार चुरोट
हिमाली दुःख आख्यानमा
विष्णुशमशेरको त्यो मुक्का